CodeGuard: Weebụsaịtị ndabere na Clouds | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 6, 2012 Wednesday, December 5, 2012 Douglas Karr
Ihe dị ka otu afọ gara aga, anyị nwere onye ahịa kpọrọ anyị na ha enweghị obi ike. Ha kpochapụrụ onye ọrụ na sistemụ ha na onye ọrụ ahụ nwere ọdịnaya niile ka ọdịnaya ehichapụkwara. Ọdịnaya ahụ apụla. Ọnwa ole na-arụ ọrụ iji mejupụta saịtị ahụ… niile abanyela na obi. Ntinye aka anyị bụ iji wulite isiokwu ha, ọ bụghị ijikwa nnabata na mmejuputa ya. N'ihi ya, anyị nwere nkwado ndabere isiokwu… echekwara ọdịnaya furu efu na nchekwa data. N'ezie, ha enweghị usoro nchekwa data nchekwa ma ọ bụ ụlọ ọrụ nnabata ha.
Kemgbe ahụ, anyị ejirila n'aka na, n'agbanyeghị agbanyeghị njikọ anyị na ndị ahịa, na ha kwesịrị ekwesị nchekwa na nkwado ndabere na mpaghara dị maka saịtị ha. Ọtụtụ na-adabere na ndị otu IT ha ma ọ bụ ndị ọbịa hosting mana anyị na-ahụkarị na nkwado ndabere na mpaghara nwere oke na faịlụ ma ọ bụ data - mana ọ bụghị mgbe niile.
CodeGuard na-enye akpaka mkpokọta ndabere ngwọta site Software dị ka a Ọrụ, na-eme ka anwansi na-eme! Ọ bụ ya n’azụ Mpaghara na-enweghị ike ịgabiga nyochaa saịtị gị ma hụ na ọ dị mma. Ọ bụrụ na CodeGuard hụrụ ngbanwe ọ bụla na saịtị gị, ọ ga - eweghachite ọhụụ yana gbanye gị ozi email ọsọ ọsọ.
Dozie nsogbu ngwa ngwa - Iji CodeGuard gbanwere ihe mgbanwe ohuru, ị ga - belata oge a na - enweghị ike iji chọpụta ihe kpatara nsogbu ndị ahịa gị mepụtara. Site na iji otu pịa weghachite, ị ga-belata oge dị mkpa iji dozie nsogbu ndị a, mgbe achọpụtapụtara ihe kpatara ya.
Chedo ndị ahịa gị - Ọtụtụ mgbe, ndị ahịa bụ ndị iro ha kachasị njọ n’amaghị ama. Eziokwu na-adịghị mma bụ na nhichapụ faịlụ, overwrites, na njehie mmadụ dị mfe na-akpata nsogbu karịa ndị na-eme ihe ọjọọ na ntinye malware. Site na CodeGuard, ị nwere ike ichebe ndị ahịa gị n'aka onwe ha.
Chedo akara gị - Gbochie onu ahia site na ijikwa ike site na ikwuputa oru doro anya maka ya na inweta ihe ndi ahia gi na enye gi. Gbanwee awa ndị a na-apụghị ịgbagha agbagha ka ọ bụrụ ọrụ bara uru site na ịnweta nkwekọrịta ndị ahịa na ị na-edozi nsogbu ndị emere na mpụga nke njikwa gị.
Dịkwuo gị ego - Tinye ntinye ego ntinye ego na azụmaahịa gị nke na-agaghị ahapụ gị. Ellingjụ ndị ahịa ihe dị mfe. (i) Nanị rụọ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ ha mgbe mbụ ị na-ewu ya ma ọ bụ mkpa ime mmelite. (ii) Tinye CodeGuard dị ka ihe akara, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, gosi onye ahịa gị vidiyo anyị iji kọwaa ihe kpatara ha ji chọọ ya.
CodeGuard na-eji teknụzụ agnostic na-arụ ọrụ iji kwado ọtụtụ usoro njikwa ọdịnaya na ngwa. Nke a na-enye CodeGuard nkwado ndabere ọ bụla ụdị saịtị ma ọ bụ nchekwa data, gụnyere WordPress, Joomla !, Magento, Drupal, phpBB na MySQL.
Tags: ndaberebackupskoodu nchekwawordpress backups